Welcome to Taungoo Blog: July 2008
မင်း ရိုးတယ်လို့ မဆိုလိုဘူး….
မင်းပီတီတွေမှာ သွေးတစ်စက်တော့ မစွန်းစေချင်ဘူး….
အခြားတစ်ယောက်နဲ့ မြေနီလမ်းပေါ်လိမ့်နေတာ မင်းသိရဲ့လား….
အဲ့ဒီ ကန်ဘောင်ပေါ်က မြက်တွေ ခွေလှိမ့်နေတာ မင်းသိရဲ့လား….
မင်းပေးထားတဲ့ နာရီလေးကတော့ အဲ့အချိန်မှာ ကြိုးပြုတ်နေတာ မင်းသိရဲ့လား…
ညညဆို မင်းကို သတိရတဲ့စိတ်နဲ့ အိပ်မရလို့ဆို…….
မဂိုလမ်းက ထိပ်ပြောင်နဲ့ Club တွေ ပြောင်းပြောင်းတက်နေတာ မင်းသိရဲ့လား…..
မင်းကတော့ သိုသိပ်စွာ ယိုဖိတ်နေတာ…
အတင်းတိုးဝှေ့တတ်တဲ့ သူ့အကြောင်းတွေ မင်းမသိပါဘူး…
မင်းရှိတဲ့ ကမ္ဘာကနေ အပြင်ကိုလည်း ထွက်ကြည့်ဦး…….
ကျွန်တော့်ကို ဖြတ်သန်းသွားသော အိပ်မက်
နှစ် အချိုး တစ်.... .... ...
သူ့ဘက်က ကစားတယ် ...
သေဆိုသေ၊ ရှင်ဆိုရှင် ၊
ကျွန်တော့်ကို သူက အစိုးရတယ်.... .... ....
အလံဖြူလေး တလွင့်လွင့်နဲ့ပေါ့လေ.... .... ...
တွယ်ကပ်ငြိ ကျွန်တော့်နှလုံးသားကို စားသောက်
စီးဆင်းနေတဲ့မူးမြစ်ကြီးထဲ ကျွန်တော်ခေါင်းမဖေါ်နိုင်အား.... .... ....
Author : yoyar |